Sotasota nataon’ireo teratany shinoa tamin’ireo vahiny mpanao gazety nanangona vaovao momba ny tondradrano tao Zhengzhou · Global Voices teny Malagasy
'Tokony fijery miabo no anananao momba an'i Shina'
Voadika ny 27 Septambra 2021 5:08 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Italiano, Español, English
Pikantsary avy amin'ny tatitry ny BBC momba ireo faharavàna nateraky ny tondradrano tao Zhengzhou. Robin Brant ilay mpanao gazety eto.
Roda Kwan no nanoratra voalohany ny tatitra etsy ambany ary nivoaka tao amin'ny Hong Kong Free Press tamin'ny 26 Jolay 2021. Naverin'ny Global Voices navoaka araka ny fifanarahana hifampizàra votoaty.
Nandritra ny faran'ny herinandro, marobe ireo iraky ny gazety iraisampirenena no nosotasotain'ireo teratany shinoa teny an'arabe tao Zhengzhou teny am-panangonana vaovao taorian'ilay tondradrano goavana tao amin'io tanàna shinoa io ny 22 Jolay.
Tototry ny famoahana hafatra feno hatezerana ny sehatra media sôsialy Weibo, nanakianana an'i Robin Brant, iraky ny BBC ao Shina, noho ny tatitra iray izay nametraka fisalasalàna momba ny mampahomby na tsia ilay tetikasa nanaovana fotodrafitrasa nandaniana miliara marobe hifehezana ny tondradrano ao amin'ilay tanàna taorian'ny namoizana ain'olona am-polony mahery tao anatina fiarandalamby ambanin'ny tany nandritra ilay tondradrano.
‘Tena tsy haintsika hoe nahoana ry zareo no mbola tena marefo toy izao’, hoy i Brant tao anaty tatitra iray tamin'ny Zoma lasa teo, nampiany fa efa nampitandrina ireo governemantam-paritra hafa i Beijing mba hijery ny fahavononan-dry zareo sy ireo fepetra any amin'ny metrô.
Nivezivezy tety anaty tambajotra nandritra ilay tondradrano ny lahatsary mampiseho ireo mpandeha dobo rano hatreny amin'ny tratrany tao anatin'ireo fiarandalamby hipoka olona.
Ireo shinoa mpikirakira aterineto tao amin'ny Weibo, tsy misy hafa amin'ny Twitter ao amin'ny firenena, dia niampanga an'i Brant ho “vahiny mpanely tsaho” sy “manova tanteraka ny tena zavamisy” any anatin'ireo tatitra nataony momba ilay tondradrano.
Ankehitriny ny tanàna notsidihana halina tao avaratr'i Zhengzhou dia miatrika fiakaran'ny haavon'ny rano. Halina dia nafindran'ireo mpamonjy voina ny mponina. Misy izao ny tatitra hoe ho avily làlana ilay renirano eo akaiky eo, tsy misy intsony antony tokony handaozana ny tanàna androany. pic.twitter.com/byTUPqlQE2
— Robin Brant 白洛宾 (@robindbrant) 23 Jolay 2021
“Im-betsaka niseho tany amin'ireo faritra voadona teto an-tanànantsika ilay mpanao gazetin'ny BBC, Robin Brant, ary tena nanova tanteraka ny zavamisy. Raha hitanareo io olona io, antsoy avy hatrany ny pôlisy”, hoy ny vakin'ny lahatsoratra iray ny Sabotsy teo.
Ny ampitson'io, Alice Su, lehiben'ny birao ao Beijing ho an'ny LA Times, sy Mathias Boelinger iraky ny Deutsche Welle ao Shina no nirohotan'ireo olona feno hatezerana izay diso fihevitra nandray an'i Boelinger ho i Brant.
‘Tsy nitsahatra nanositosika ahy ry zareo no sady mikiakiaka hoe olon-doza aho ary tokony hatsahatro ny fandotoana an'i Shina. Nisy lehilahy izay [nanandrana] nisintona ny telefaoniko’, hoy ny bitsika nalefan'i Boelinger taorian'ilay tranga.
‘Tokony fijery miabo no anananao momba an'i Shina’, hoy ny lehilahy iray tamin'i Boelinger, araka ny asehon'ny lahatsary iray mivezivezy ao amin'ny Weibo.
Nametraka fanontaniana tamin'ireo mpivarotra tao an-tanàna izy roa ireo, momba ny fanamby atrehan-dry zareo ao anatin'ireo tondradrano, ary ny fanampiana “tsy maharaka” avy amin'ny governemanta mba handritana ireo fotodrafitrasa ambanin'ny tany, hoy ny bitsik'i Su.
Ireo iraka avy amin'ny Al Jazeera sy ny Associated Press koa nibitsika momba ny sotasota nataon'ny olona azy, izay naka lahatsary azy ireo ary niantso ny manampahefana.
Katrina Yu avy amin'ny Al Jazeera nibitsika fa “marika ratsin'ny hatezerana sy ny fitomboan'ny tsy fahatokisana ny media vahiny ao Shina” ireo tranga ireo.
Marika ratsin'ny hatezerana sy ny tsy fahatokisana ireo media vahiny ao #Shina. Rehefa naka sary teo anoloan'ny metrô tao #Zhengzhou izahay dia noraketin'ireo olona tanaty lahatsary sady niantsoany manampahefana. Ity lahatsoratra tao amin'ny Weibo ity dia mampitandrina ny mponina “Aza manaiky hitafa amin'ireo media vahiny, aza mety ho ampiasaina!” pic.twitter.com/3gI1eUjsIn
— Katrina Yu (@Katmyu) 24 Jolay 2021
Tato anatin'ny taona roa farany, 20 raha kely ireo solontenan'ny gazety vahiny no noroahan'i Shina, io no isa betsaka indrindra hatramin'ny 1989, araka ny lazain'ny Klioban'ireo Solontena Vahiny ao Shina.
‘Ny anganon'ilay tanàna spaonjy’
Nitranga ireny zavatra ireny rehefa notsinian'ilay mediam-panjakana Global Times ireo tatitry nataon'ny media vahiny hoe nopotehan'ireo tondradrano ny ‘angano’ maha-‘tanàna spaonjy’ an'i Zhengzhou taorian'ny fampiasambola 50 lavitrisa RMB nataon'ny governemanta (7.72 lavitrisa dolara amerikàna) tamin'ny 2018 nanaovana ireo fotodrafitrasa natao hiarovana ny tanàna amin'ny fisiana tondradrano henjana.
Nametrahan'ilay lahatsoratra fanontaniana ihany koa ny amin'ny hetsika hamehana avy amin'ny manampahefana manoloana ilay tondradrano.
‘Nandà ireny tatitra ireny ireo Shinoa mpanara-baovao, tamin'ny fanamarihana fa nanitrikitrika ny fahavoazana ireo media vahiny, saingy nodian'izy ireny tsy hita ny tena zavamisy, dia ny hoe ireo tondradrano ao Zhengzhou dia tranga iray ao anatin'ny taonjato iray, ary mihoatra lavitra ny fahafaha-mizakan'ny tanàna iray, na iza izy na izy”, hoy ny vakin'ny lahatsoratry ny Global Times. ‘Nomarihan-dry zareo fa nanao izay tratry ny heriny ny governemanta ao Zhengzhou mba hampihenana ny fahavoazana.’
Orana tokony hilatsaka mandritra ny taona iray no nirotsaka tao anatin'ny andro telo tao Zhengzhou, ao amin'ny faritanin'i Henan, tamin'ny herinandro lasa, niteraka tondradrano nahafatesana olona 56 raha kely indrindra, araka ny tarehimarika ôfisialy.